Dhagarta Sheydaanka. Qisadan cajiibkaa aqrisoHiiraan | Hiiraan Net | Wararka somalia | Somali news | Warar, Quraan iyo Tafsiir.Hiiraan | Hiiraan Net |
Insaanka 4 cadow ayuu leeyahay. Waa naf, waa hawo, waa sheeydaan waa aduunyo. Afartaas sheey waxay cadoow ku yihiin insaanka. Maanta waxaan wax yar iska xasuusineeynaa xeelada uu isticmaalo sheeydaanka. Sheeydaanka awood malaha laakiin labo sheey ayuu isticmaalaa koow inuu dhagta wax kugu sheego oo kuu qurxiyo ayuu yaqaanaa laakiin dhagar ayuu yaqaanaa ama xeel
ad uu dadka wadada toosan uu kaga leexiyo.
Insaanka labo ayuu ukala baxaa caabud iyo caalim. Qiso yar ila aqri…. Nin caabud ah ayaa sheeydaan u yimid wuxuu yiri’ ninyahoow cudur aan aqaano ayaa daawadiisa taqaanaa maan wada shaqeeysano oo dadka cudurkaas haayo aan kusoo aadiyo adna aad ka daaweeysid. War ninyahoow ani cudur daawadiisa ma aqaano. Soo faataxada ma taqaanid? Haaa. Ane waxaa aqaanaa dadka qalalka ku dhaco daawadiisa ama saraca ayaan aqaanaa. Waan kusoo aadinayaa adigana faataxada ayaa ku aqrineeysaa sidaa aan uwada shaqeeysano.
Qalalkaan waxaa weeye sheeydaan asaga ayaa markii uu dhufto insaanka. Insaankii qalal ayuu sameeynayaa. Markaa dadkii meeshii ka ag dhawaa ayuu wuxuu ku leeyahay war qofkaan cudurka haayo nin daawadiisa haayo ayaan aqaan waa nin caabud ah oo meeshaa dagan ee orod u keeya.
Halkii markii la keeno ileeyn asagii uun baa dhuftay markii uu dhaho acaduudu bilaahi mina sheeydaani rajiim dhaho bismilahi raxmaani raxiim faataxadii dhameeystiro wuu ka baxayaa, ileeyn waa wax leys la ogaaye. Qofkii waa fiicnaanayaa sidii ayuu dariiqiisii ku marayaa. Qofkale ayuu soo dhufanayaa hadana sidii ookale. Si uu caabudkii kumashquuliyo dadkiina ku barteen.
Kadib sheeydaankii wuxuu damcay sidii uu ninkaan wadada ugu leexin lahaa ayuu falankiisii galay. Gabar quruxsan oo wadada socoto walaalaheed la socodaan ayuu dhuftay qalalkii ayaa qabtay. Markaas ayuu yiri” miyaadan maqlin ninkaa caabuda ah asaga u geeya arinkaan oo kale daawadiisa ayuu yaqaan. Sidii baa caabudkii loo keenay faataxadii ayuu ku aqriyay waa ka baxay. Weey soo wateen gabartii aqalkii agtiisa markii la gaaray ayuu hadana ku dhuftay , hadana waa la soo celiyay sidii ookale, hadana waa wateen hadana sidii oo kale ayagoo sidaa wadada ugu sii jiro.
Kadib ayaa sheeydaan rayi usoo jeediyay ayuu wuxuu yiri” war waa dhibtoodeen oo aad daasheen gabadhaan teendho halaguu dhiso ninka caabuda agtiisa ah halkaasna dajiya. Halkii baa gabadhii la dajiyay. Hadii la dajiyay meeshii gabadhii keligeed ayay ku noqoday. Wadaadkii sheeydaankii ayaa dalaq yiri, haduu dalaq yiri ayuu wuxuu gabadhii ku turunturoodo oo halkaas gabadhii ugu zinooday. Ay halkaas uur ku bixiso ayuu gaarsiiyay.
Kadib ayuu wadaadkii welwelay markaas ayuu yiri” maxaa talo ah? Markaas ayuu sheeydaankii yiri” ma dooneeysaa inaad iska asturdo ? haa. Habeen madoow intaad disho xabaal. Caabudkii sidii buu yeelay.
Sheeydaan wuu baxay wuxuu u tagay reerkii wuxuu ku dhahay gabadhiinii ninkii caabuda ahaa oo aad ku aaminteen oo aad agtiisa dajiseen sidaan ayuu sameeyay waana dilay gabadhiinii kaalaya aan qabrigeedii ina soo tusee. Qabrigii ayuu dul keenay.
qabrigeedii ina soo tusee. Qabrigii ayuu dul keenay.Caabudkii meeshii baa lagu qabtay lagu xukumay in la dilo. Tiirkii dilka ayaa lagu xiray. Sheeydaankii ayaa u yimid markaas ayuu yiri” haye wadaad. Hada waad aragtaa arinkii baa uxiranahay .
Sheeydaankii baa yiri” xarigaan aniga lee kaa furi karo.
Wadaadkii” ee maad yeeshid oo iga furtid xariga.
Sheeydaankii” maya. Laakiin hal sharuud waa inaa sameeysaa kadib ayaa kaa furaa.
Wadaadkii” waa maxay iisheeg hadii maanta iga furtid xarigaan oo nolosheeda badbaadisid wax walbo waa kuu sameeynaaa.
Sheeydaankii” inaad ii sajuudid ayaa doonayaa, kadib ayaa kaa furaa waaana ku bad baadinaa.
Wadaadkii “ dee sajuuda ilaaheey bes ayaa loo sajuudaa.
Sheeydaankii” dee adigana halagu daldalo. Hadaad sajuudii diiday.Wadaadkii” haye xariga iga fur aan kuusajuudee.
Sheeydaankii” maya adiga oo xarigaaga kujiro ii sajuuud. Madaxa ii foorari.
Wadaadkii sidii ayuu yeelay waa u sajuuday. Kadib nimankii daldali lahaa ayaa xagaa kasoo baxay iyo gabadhii walaalaheed. Sheeydaankii markii uu argay qoladii. Anigu kaama furi karo xariga waa leey argaa. Sidii ayaana asagii xunkunga lagu riday Xukunkii ayaa lagu riday asagoo zino galay dil sameeyay hadana ilaaheeygiisii ku kufriyay oo wadadii ilaaheey ka leexday oo cadaabkii ku mudeeystay subxaanalaah.
sheeydaanka dhagartiisa ma yaro ilahey hanaga bad baadiyo shartiisa aaamiin…………